Fa maninona ny filaharana Keyword no tsy tokony ho metrika fampisehoana voalohany indrindra anao Martech Zone
Maninona ny laharam-pahamehana amin'ny teny lakile no tsy tokony hatao metrika fampisehoana voalohany anao
Asabotsy Jolay 28, 2018 Asabotsy Jolay 28, 2018 Bill Acholla
Tsy ela akory izay, ny paikadin'ny SEO dia ahitana ny fahazoana laharana amin'ny teny lakile. Ny teny lakile no antony voalohany nandrefesana ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitra. Ireo mpanorina tranokala dia mameno ireo tranonkala amin'ny teny lakile, ary ny mpanjifa dia te-hahita ny valiny. Ny valiny anefa dia nampiseho sary hafa.
Raha toa ny fampianaranao SEO ho an'ireo vao manomboka mampiasa fitaovana Google hahitana teny lakile ary avy eo apetrakao ao amin'ny tranokala manerana, dia mety handeha amin'ny lalana marina izy io, saingy amin'ny lafiny iray ihany. Amin'ity tranga ity ho an'ny SEO, ny teny fanalahidy dia iray amin'ireo metrika marobe mitondra amin'ny laharana tsara kokoa amin'ny tranonkalanao.
Tany am-piandohana, tamin'ny fiezahana ny SEO ny bilaogiko, dia nanao toy izany koa, Keyword stuffing. Ary tsy izany ihany no lesoka nataoko nahatonga ahy Fanentanana SEO ho tsy misy dikany. Ankehitriny rehefa nanao fikarohana ampy aho dia manana fahalalana ampy hizarana ny fahitako aminao rehetra mba hikarakaranao ireo teboka manan-danja rehetra alohan'ny handrosoanao amin'ny SEO anao.
Alohan'ny hidirantsika amin'ny teny lakile, andao aloha hizotra amin'ny fomba fiasan'ny fikarohana Google. Tsy toy ny taloha raha ny laharana ambony ao amin'ny SERPS dia satria ny fampiasana teny lakile na andian-teny fototra, ankehitriny, Google dia tsy manome laharana ireo teny lakile. Google kosa manome ny laharana ny valiny araka ny valiny, izany hoe, inona ny fampahalalana nokasain'ny mpampiasa halaina. Nanomboka nidina ny maha-zava-dehibe ny teny lakile amin'ny fikarohana satria ny teny fanalahidin'ny mpampiasa ihany no nantitranteriny fa tsy izay izy ireo naniry.
Google dia miezaka ny hanome anao valiny izay tianao. Midika izany fa mety mbola misy pejy iray ambony toerana na eo aza ny teny fikarohana tsy eo mihitsy amin'ny famaritana Meta na amin'ny pejy. Ity ambany ity ohatra.
Azonao atao ny mahita fa ny valiny avo indrindra dia tsy manana ny antsasaky ny teny akory ao amin'ilay andianteny lehibe. Toy izany koa, ao amin'ny pejin-tranonkala ny valiny ambony, ny teny hoe "orana " tsy misy akory. Izany dia milaza ny fomba ianarantsika avy ny valiny dia zava-dehibe kokoa amin'i Google fa tsy ny teny lakile fotsiny.
Ity koa dia mitondra antsika ho amin'ny teboka fa ny laharam-pahamehana fanalahidy matanjaka dia tsy midika inona amin'ny paikadin'ny SEO ankehitriny. Ny laharam-pahamehana Keyword dia ampahany iray amin'ny fizotry ny fiovam-po. Ity misy fomba Nanazava izany tao amin'ny bilaogin'izy ireo i Google:
Noho izany, alohan'ny tokony hidiranao amin'ny filaharana teny lakile ny tranokalanao dia tokony ho azo adika sy azo idirana. Na dia efa nilahatra aza ny tranokalanao dia mila manome fahafaham-po ny fikasan'ny mpampiasa ao ambadiky ny fikarohana izy ary mahatratra ny tanjon'ny orinasanao. (Ohatra fampidinana, famandrihana mailaka, sns.)
Aleo ihany ny vola miditra sy ny tombom-barotra; teny lakile mafy tsy midika hoe hanana ianao fivezivezena betsaka amin'ny fifamoivoizana, raha jerena hatrany ireo antony voalaza etsy aloha sy ao aorinan'ny bilaogy, sarotra ny milaza hoe ohatrinona ny fifamoivoizan'ny teny lakile hita ao amin'ny tranonkalanao. Na dia mampiseho valiny mahasoa aza ilay mpanamarin-laharana dia tokony ho fantatrao fa ny data momba ny teny lakile tadiavinao dia tsy marina tanteraka. Mba hanazavana ny anton'izany, afaka mandray teny tokana aho hamaliana, Personalization.
Mamelà ahy hanazava aminao ny fiantraikan'ny personalization tamin'ny fikarohana sy ny valin'ny fikarohana tamin'ny fomba iray hihoarana ny maha-zava-dehibe ny teny lakile manoloana ny laharana amin'ny valin'ny fikarohana.
Google dia manana fampahalalana marobe, ao anatin'izany ny tantaram-pikarohantsika, ny toerana misy antsika, ny demografika, ny fitaovana ampiasaintsika na izay ampiasainay indrindra, ny fitondran-teninay, ireo toerana izay anananay betsaka indrindra ary hetsika maro hafa amin'ny sehatra hafa toa toy ny Youtube.
Ka ohatra, raha nitady aho tobim-pahasalamana any New Jersey, ny valiny ambony ao amin'ny Google-ko dia mampiseho ny tranokalan'ny gym iray izay efa notsidihiko taloha.
Toy izany koa, raha mitady trano fisakafoanana any Newark City amin'ny 11 maraina aho, dia ho hitan'ny Google ho toy ny olona ao anaty fiara mahita trano fisakafoanana hisakafoanana antoandro izany.
Noho izany, hanivanana ny valiny, dia hasehon'i Google ireo trano fisakafoanana misokatra, manolotra sakafo antoandro ary ao anatin'ny tariby mitondra ny toerako ankehitriny ho valiny voalohany.
Ohatra roa fotsiny ireo; misy zavatra maro hafa izay milaza ny tsy fampiasan'ny Google ny filaharana teny fanalahidy, hanomezana laharana ny valiny.
Ny fikarohana amin'ny finday dia miteraka valiny samihafa raha ampitahaina amin'ny rehefa mikaroka amin'ny birao. Toy izany koa, Feon'i Google mitazona valiny hafa raha oharina amin'ny valiny Google ankehitriny. Miova ihany koa ny valiny voalohany raha mampiasa ny navigateur amin'ny maody incognito anao ianao.
Toy izany koa, io teny fikarohana io ihany izay niditra tao avaratr'i Kalifornia dia mety hanana valiny hafa raha ampitahaina raha tany atsimon'i Kalifornia no niditra.
Raha jerena, na dia mifanila mifanatrika aza izaho sy ianao dia mbola hitovy ny valin'ny fikarohana. Izany dia noho ny antony voalaza etsy ambony, izany hoe ny personalization.
Tahaka ny nataoko tany am-piandohana, azonao atao koa ny manamarina ny fahombiazan'ny fampielezan-kevitrao amin'ny alàlan'ny fikarohana ireo teny lakile mifandraika ary avy eo mahita raha ianao laharana eo amin'ny pejy voalohany.
Avy eo ianao dia hiverina amin'ny tatitra raha hijery hoe inona ny salan'isa antonony ho an'ny teny fanalahidy kendrenao.
Hitanay etsy ambony fa tsy metrika mifandraika ny teny fanalahidy hitsarana ny fahombiazan'ny orinasanao amin'ny Internet. Ka inona no azontsika atao mba hampiavaka ny tetikadintsika SEO?
Fandraisana andraikitra ambony indrindra
Fampiasana tetika SEO androany teny fanalahidy lava rambo. Nahoana? Ataon'izy ireo ho mifandraika kokoa amin'ny motera fikarohana ny pejinao, noho izany dia avo lenta kokoa ho an'ny olona mety amin'ny toerana mety.
Tsy maninona ny filaharan'ny teny fanalahidin'ny tranonkalanao, satria misy fomba isan-karazany itadiavan'ny olona. Ary koa, Google dia mampiseho ny valiny amin'ny tsirairay avy arakaraka ny tantarany, ny toerany, ny fitaovany sns.
Mila mahazo antoka ianao fa ny isan'ny mpitsidika tonga amin'ny pejinao amin'ny alàlan'ny fikarohana biolojika dia mitombo isan'andro, isam-bolana sy isan-taona. Mila mitandrina ihany koa ianao fa ireo mpitsidika sy ireo mpitsidika vaovao dia avy ao anatin'ny tsenanao kendrenao.
Tokony hanantena fiovam-po bebe kokoa ianao avy amin'ireo mpitsidika tonga amin'ny alàlan'ny fikarohana organik.
Refesina ny fiovam-po
Ataovy ao an-tsaina fa ny zavatra niainanao tamin'ny fikarohana dia tsy hita taratra amin'ny valin'ny fikarohana ho an'ireo mpanjifanao ho avy. Izany no antony tsy fampisehoana ny fahombiazan'ny fampielezankevitra SEO na milaza amin'ny tranokalanao fa hahazo fiovam-po bebe kokoa.
Mifantoha amin'ny valiny, ny tanjonao dia ny fampiantsoana ny telefaoninao, ny fandefasana mailaka feno forme contact, na ny fibaikoanao mba hampisehoana baiko vaovao.
Avy eo ianao irery no afaka manambara ny fampielezankevitra anao ho mahomby. Tsy mora ny mankany. Aza misalasala manontany ny fanampian'ny manam-pahaizana hananganana ny fampielezan-kevitrao ary hanatsara ny lalao SEO anao manokana.
Tags: filaharana teny lakilefilaharana teny lakileteny lakile lava rambofitomboana voajanaharyserp fikarohana organikaianarantsika avySEO
Bill Acholla dia mpivarotra nomerika nomerika izay manaparitaka votoaty tsy misy dikany izay azon'ny olona toa anao ampiasaina hampitomboana ny orinasany, toy ity lahatsoratra ity. Zahao ny bilaogin'ny orinasany ao amin'ny Billacholla.com
Ny fanambin'ny Marketing Automation an'ny mpivarotra, ny mpivarotra ary ny CEO (Data + Advice)